Soomaaliya oo qabanaysa shirweyne looga hadlayo xag-jirnimada oo lagu casumayo culimada Islaamka – Radio Daljir
Seteembar 13, 2013 4:11 b 0
Muqdisho, September 13, 2013 – Gollaha wasiirada xukuumada federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si buuxda u taageeray shirkii khataraha Xag-jirnimada iyo ku talax-taga diinta Islaamka oo dhowaan ku soo idlaaday Muqdisho, kulanka ayaa laga soo saaray faah-faahin la xiriira shirka.
Ra?isal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa gollaha gudoominayey waxaana wasiirada Soomaaliya ay ka doodeen qoddobada ka soo baxay shirka, iyagoo taageero balaaran u fidiyey Fatwadii culimada.
Wasiirka warfaafinta Isgaarsiinta iyo boostada ee Soomaaliya Cabdulaahi Ciil-mooge Xirsi oo war-baahinta dalka la hadlay, waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay fulinayso qoddobadii ka soo baxay shirka culimada ee Muqdisho ku soo dhamaaday.
Gollaha wasiirada ee Soomaaliya shirkooda Muqdisho waxay kaloo ku shaaciyeen in 90-ka maalmood ee soo socda shirweyne caalamiga ah lagu qaban doono Muqdisho, si loogu xoojiyo Fatwadii ka soo baxday shirka culimada Soomaalida.
? Saddex bilood gudahood waxaa qorshaha dowladda ku jirta in shirweyne ay ka soo qeyb-gelayaan culimada Islaamka lagu qabto dalka, si loo xoojiyo fatwadii ay soo saareen culimada Soomaalida, taas waxaa looga gol-leeyahay in dadka Soomaalida aan si khaldan diinta loogu sheegin? ayuu yiri Ciil-mooge
Ra?isal wasaare wasaare ?Saacid ?ayaa dhowaan soo xiray shirweynaha culimada oo muddo shan maalmood ah ka socday Muqdisho, wuxuu sheegay in ay xukuumadu ka doodi doonto sida ugu wanaagsan ee lagu hir-gelin karo qoddobada ka soo baxay shirka Muqdisho.